Fitakiana maromaro… : nentina am-bavaka ny hetsiky ny vahoakan’i Soamahamanina | NewsMada
Fitakiana maromaro… : nentina am-bavaka ny hetsiky ny vahoakan’i Soamahamanina
Notanterahina, omaly tao amin’ny fiangonana katolika Soamahamanina ny fotoam-pivavahana manokana ho an’ny firenena sy ny vahoaka any an-toerana ary i Andriamananoro Augustin, tanana am-ponja vonjimaika eny Antanimora. Niompanan’ny lohahevitra ny hoe « aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana » ary nitarika izany ny pretra Rakotovao Raymond Jules avy any Miarinarivo. Nitondra ny teny fisaorana ny rehetra teo am-pamaranana i « Dada Zafy », rain’Andriamananoro Augustin. Nanamafy koa ireo avy amin’ny fiarahamonim-pirenena Vona fa tsy hanaiky hatramin’ny farany. « Hiady ho an’ny taninay sy ny tanindrazanay izahay ary mangataka sy mitaky koa ny hamoahana ny zanakay, notanana any am-ponja », hoy izy ireo. Teo koa ny filazan’ny vavolombelona fa naka sary ny nahatongavan’ity minisitra teo aloha ity tany an-toerana tamin’ireny fotoana ireny. « Tsy nitarika hetsika na fanakorontanana izy ary tsy niseho tany mihitsy koa teo aloha sy taorian’izany », hoy ihany izy ireo.
Hiakatra fitsarana rahampitso…
Tsiahivina fa naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora, ny 15 desambra teo, ity filoha lefitry ny Mapar ity taorian’ny fiakarany fampanoavana tetsy Anosy. Hiakatra fitsarana avy hatrany ny 20 desambra izao. Anisan’ny vesatra hanenjehana azy ny fikononkononana fanonganam-panjakana. Nialohavan’ny fisamborana azy teny am-pandevenana ny rafozany teny Itaosy izany ary nentina tany Miarinarivo avy eo. Nifampitadiavana taorian’izany rehefa hiakatra fampanoavana ary niteraka honohono sy tsaho. Fanina hatramin’ny fianakaviana sy ny mpisolovava azy… Niafara amin’izao fitakiana ny hamoahana azy izao ny « Raharaha ». Ho fantatra rahampitso ny ho avin’ity mpanao politika sady efa minisitra ity.
Niatrika ny fotoam-pivavahana tany Soamahamanina, omaly, ireo lohandohany eo anivon’ny Mapar. Anisan’izany ireo avy amin’ny birao nasionaly sy ny depiote ary koa ireo mpiandany amin’ny filohan’ny Tetezamita.